Chiziviso – Daniel Mutendi
Home > Blog > Daniel Mutendi > Chiziviso
Aug 09, 2016 8 Likes 1953 Views Standard
Mhoroi mosemose uko! Ndati ndimboshumavo nyaya yangu pano. E-ee, Pano paita zvedare kana kuti dandaro chairo. Ndavhuravo nzvimbo yekuti kunevaya vanoshuvira kuhwereketa kana kutaura nevamwe vanonakigwa nendimi dzeChiShona vapote vachivhakacha pano kana kutotumiravo fungwa dzavo dzavangada kuti vamwe vadzidzeye.
Munoona, chimwe chezvinhu zvinoita kuti isu vanhu vazhinji vemuno muAfrica, kunyanya muno muZimbabwe tizvivenge pakusvika kurasha zvinhu zvedu chaizvo tichizondopemha chero mitauro chaiyo yevamwe setisina yedu, ndechekuti zvedu zvacho zvinowanza kushayiwa vanonyora kuti zvichengeteke. Kune vanhu vakawanda chose vandinohwa vachishuvira kuti dai vaigona kutaura ndimi dzanamai vavo vachifara chose. Kuvanhu vakadai, herino bindu renyu rekuti musherekete zvenyu makafara.
Mukatarisa zviripano muchaona kuti pano ndichapota ndichinyora fungwa dzangu uyevo pane pamwe pakamirira veni vakasiyana-siyana. Kana aripo unoshuvira kunyoravo fungwa dzake achida kudzishambadza pano, unongonyora zvake mwadhi kwandiri. Kana ini nevamwe vangu tikaona kuti zvinyogwa zvako hazvipokani nezvinodiwa pano, tinobva tangozvishambadza nenguva yakafanira.
Kune vanyori vemabhuku nenhetembo vanoda kuwana pekumbodzidzira kana kumbozama kupima kuti zvinyogwa zvavo zvinogashigwa sei nevaverengi, uno ndiwo mumwe wemikana yakanaka yokuzama nayo. Vanogona kumbotumira kana mapandi enyaya dzavo kuno, isu todzishambadza pano. Vana vechikoro varikukundikana nekudzidza mutauro weChiShona, munogona kuwana rubatsiro gwakawanda chose pano.
Muchaona kuti kunyora kwandinoita ndinoshandisa mamwe ma ‘b’ asingawanzo wonekwa mune iya yavanoti ‘standard Shona’ akaita sana; Q na L. Chidavado changuvo ichocho, musazonyanya kukathlamara nazvo henyu.
Ndinokumbiravo kuti kana muchiziva vanhu vangada zvakadai, muvarumevo zheve muchivazivisa zvenzvimbo ino kana kuti website ino; http://www.danielmutendi.co.zw
Ndini Daniel Mutendi.